Amaphutha ama-5 angathola i-imeyili yakho kufolda yogaxekile | Martech Zone
Amaphutha ama-5 angathola i-imeyili yakho kufolda yogaxekile
ISonto, May 3, 2015 ISonto, May 3, 2015 Douglas Karr
Uma kunengxenye eyodwa yomsebenzi wami eqhubeka nokungenza ngishaye ikhanda lami ngibheke odongeni, kunjalo ukukhishwa kwe-imeyili. Siyaqhubeka nokukhulisa uhlu olubandakanyekile lwababhalisile be-imeyili kepha ama-geesh, ama-ISP ahlekisa. Kwezamabhizinisi, into eyodwa eyenzekayo ukuthi ama-imeyili ayaphenduka njengoba abasebenzi beza bengena. Sizoba nababhalisile basebenzisana njalo izinyanga bese kuthi - poof - ama-imeyili abuye. Noma okubi kakhulu, badluliselwa komunye umsebenzi obika njengo-SPAM.
Singahamba amasonto ngokoqobo ngaphandle kwemibiko ye-SPAM namazinga amancane kakhulu okuzikhipha ohlwini… bese ngokungaqondakali sibone amaphesenti ama-imeyili enza ibhokisi lokungenayo ligxume liye phezulu noma phansi. Imigqa yezihloko efanayo, isikhathi sokulethwa esifanayo, amaseva we-IP afanayo athunyelwe evela, amakheli okuphendula afanayo… ngokufanayo, ngokufanayo, ngokufanayo… nangokaboom. Ukwehla kokulethwa. Emasontweni ambalwa edlule, saze safakwa ohlwini lwabadlali abamnyama yi-ISP encane. Lapho sibuza ukuthi kungani, babevele basigunyaze… bangalokothi basitshele ukuthi kwenzekeni. Kunjengokungathi bebesivivinya nje ukuze babone ukuthi sisebenza ngokusemthethweni yini. Futhi asiyona i-imeyili enkulu - uhlu lwethu lumayelana nama-75,000.
Uma usebenzisa umhlinzeki wesevisi ye-imeyili (i-ESP), awazi nokuthi amaphesenti wakho webhokisi lokungenayo ayini. Abathengisi be-imeyili bahlala bekhuthaza ukuhanjiswa izikolo - okungukuthi, inani lama-imeyili elenza kufayela le- uya khona. Bazoba nesigatshana uqobo odinga ukusithumela ohlwini lwakho izikhathi ezimbalwa ngaphambi kokubona okuhle ukuhanjiswa izinombolo. Akudlalwa… wonke amakheli e-imeyili amabi azobhamuka futhi asuswe, ngakho-ke amaphesenti wakho wokulethwa kwebhokisi lokungenayo kufanele afike ezinombolweni abathengise ngazo.
Inkinga ukuthi inombolo noma amaphesenti yilokho kuphela okulethwe… hhayi zilethwe ebhokisini lokungenayo. Kungakho sisebenzisa 250ok - ukuqapha yethu Inbox idumela lokulethwa kanye nedumela lomthumeli wethu. Nge 250ok, sikwazile ukulungisa izingqinamba ezithile ngokuhamba kwesikhathi… kepha sisenezikhathi ezithile ezingehli kahle.
Lokho kusho, kunemikhuba emihle ongayifaka ezothuthukisa imiphumela yakho (okwamanje). I-TechnologyAdvice Research ikhishwe i-infographic, 5 Amaphutha Aphezulu E-imeyili Azokuthumela kufolda yogaxekile. I-infographic ifaka amaphutha wokuthengisa we-imeyili avamile:
I-ID yomthumeli engagunyaziwe
Lapho unayo… thumela ngemvume, thumela okuqukethwe okuhle, bese uthumela kusuka kufayela le- umhlinzeki omkhulu we-imeyili.
Tags: 250okukuhanjiswaidumela lokulethwaukukhishwa kwe-imeyiliukulethwa nge-imeyiliugaxekile we-imeyiliip idumthumeli ididumela lomthumeliugaxekileifolda yogaxekileokuqukethwe ogaxekile
SICELA UNGAHAMBI: Amaqhinga amathathu wokuPhuma angacasuli izivakashi zakho
May 4, 2015 ku-10: 16 AM
Okuxakayo ukuthi i-e-newsletter kuleli sonto equkethe le ndaba yathunyelwa kumeyili yami engafuneki…
May 4, 2015 ku-10: 37 AM
Emaphoyinti ami okuvula! Kuyakhungathekisa!
May 9, 2015 ku-10: 38 AM